दूरदर्शी बन्नुस् | प्रेरक संसार
(एक प्रेरक प्रसंग) युद्धको समय थियो, फ्रान्सका सम्राट नेपोलियन पालमा मस्त सुतिरहेका थिए । यो आधा रातको समय थियो । तब अचानक अंगरक्षकले उठा...
(एक प्रेरक प्रसंग)
युद्धको समय थियो, फ्रान्सका सम्राट नेपोलियन पालमा मस्त सुतिरहेका थिए । यो आधा रातको समय थियो । तब अचानक अंगरक्षकले उठाउदै भने 'महाराज, सेनापती तपाईसँग अहिल्यै भेट गर्न चाहन्छन् ।'
नेपोलियनले कोल्टे फेर्दै भने 'सोध के कुरा हो ।'
'दक्षिणतिरबाट शत्रुको सेनाले हमला गरे । सेनापति अब के गर्ने भन्ने थाहा पाउन चाहन्छन् ।'
नेपोलियन यो ठूलो खबर सुनेर अलिकति पनि विचलित भएनन् । उनले सेनापतिलाई नबोलाइ अंरक्षकलाई भने 'कुनाको बक्सामा चौतिस नम्बरको एउटा नक्शा राखिएको छ । त्यो सेनापतिलाई देऊ र भन्नु उनी बिहान आएर मलाई युद्धको समाचार दिउन ।'
त्यो नक्सामा दक्षिणतिरका सेनाले आक्रमण गरे भने जवाफी कारवाही कसरी गर्ने भन्ने देखाइएको थियो । त्यही अनुसारको युद्ध भयो र नेपोलियनको सेना विजयी भए ।
भोलिपल्ट सेनापतिले जितको सूचना दिदै सोधे 'यती छिटै कसरी योजना बनाउनुभयो ? के कनै देवताले तपाईको मद्दत गर्छन ?' नेपोलियनले जवाफ दिए -'हो, विचार र दुरदर्शिता नामक दुई देवता सधै मेरो साथ रहन्छन् । उनैले भविष्यको सम्भावनाप्रती मानिसले पहिलादेखि नै जागृत र सावधान हुनुपर्छ भन्ने सिकाए ।'
'भविष्यप्रति हाम्रो दृष्टि जति स्पष्ट, जति व्यापक र जति गहिरो हुन्छ त्यति नै हामी जीवनमा सफल हुन सक्नेछौ ।' - डा. विजय अग्रवाल
प्रेरक संसार: दूरदर्शी बन्नुस्